Ngaba iti ye-chamomile ikunceda ulale ngcono? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ixesha lokulala linokuba yingxaki kwabaninzi. Ukulala ebhedini, ukuvala amehlo kunye nokuphumla komzimba wakho iba sisiko lokuxakaniseka xa amaxhala engena engqondweni kwaye kunzima ukucinga ngephupha.
Ukuba umntu sele ekuxelele ukuba uphathe ikomityi yeti eshushu ukukunceda ulale, kufuneka wazi ukuba eli cebiso lisemthethweni. Jonga ukusela iti ye-chamomile eya kuphumla iyonkqonkqoza emnyango wakho.
Iti ye-Chamomile yeyona ndlela ilungileyo xa kusenziwa iziselo ezikunceda uphumle ngcono. Izakha mzimba zidibene nendalo, ukuthomalalisa ukuphakama okunceda ukuthoba isantya ekupheleni kosuku oluxakekileyo.
1 Ikunceda njani iti ye-chamomile ulale?
2 Sifanele sisele ixesha elingakanani ngaphambi kokuba silale?
Ikunceda njani iti ye-chamomile ulale?
Ngapha koko, iti ye-chamomile lukhetho olukhulu kwisiselo sokulala. Ukongeza incasa yayo enuka kamnandi kunye nokunqongophala kwe-caffeine, inokusetyenziswa kwamayeza ekudala ikho kwaye iyaziwa ngokuhlaziya.
I-Chamomile yi-antioxidant enamandla. Ngaphezulu kwe-120 iikhemikhali zezityalo ezifunyenweyo, kubandakanya ne-antioxidant apigenin, enceda ukubopha kwizamkeli zobuchopho ezikhuthaza ukozela kunye nokunciphisa ukulala.
Olunye uphando lubonisa ukuba indibaniselwano ye-chamomile kunye nelavenda yeti iluncedo ngakumbi kwabo banesiphene sokulala.
Sifanele sisele ixesha elingakanani ngaphambi kokuba silale?
Akukho maxesha eti, nangona kusenokwenzeka ukuba kutyiwe kakhulu ngaphambi kweyokulala. Ukwenza umkhwa wokusela iti ebusuku kuyafana nokukhulisa imeko ephawula ingqondo nomzimba ukuba ixesha lokulala liyasondela.